Lwaka ukulolonga | Inaliti Ukubumbela Service - CBPMM
Yintoni Automotive Izahlulo Ukubumbela
lwaka ukulolonga kubandakanya mveliso iinxalenye yeplastiki le moto ngokusebenzisa inkqubo yokubumba inaliti. Le nkqubo isetyenziswa mveliso inxalenye ebalulekileyo elingaphakathi imoto kunye yangaphandle.
Inkqubo yokubumba ngenaliti isetyenziswa ekuveliseni malunga -90% yamalungu izithuthi iimoto. Iiplastiki zithandwa kakhulu kushishino lweemoto njengoko elula, kulula ukwenza, kwaye ixesha elide kakhulu kakhulu.
With the widespread use of the injection molding process, the mass production of automotive parts became simpler and highly engabiziyo .
Inkqubo yokuvelisa iye kungafumaneka iimpazamo ngqo nil leyo ziluncedo kakhulu kushishino ngomatshini. Imimandla bokwenziwa ngokusebenzisa inkqubo yokubumba isitofu bomelele kakhulu ixesha elide nto leyo elwe kushishino ngomatshini.
Ukusetyenziswa kobugcisa inaliti ambumbe, ezimotweni ziye ayisindi okwandisa ubuchule amafutha kunye ekhuselekileyo kunye nemveliso ophezulu ezikumgangatho kunye ixesha elide iindawo.
Izinto eziluncedo Ukusebenzisa Plastic Inaliti Ikubumbe for Automotive Izahlulo Ukubumbela
Inkqubo sokubumbela inaliti zeplastiki yenye iiteknoloji ukuvelisa iinxalenye isithuthuthu ixesha elide yaye ezikumgangatho ophezulu kunye namacandelo. Kukho okumbalwa yokusebenzisa ubuchwepheshe Manufacturing ungamalungu ngesithuthuthu. Ezinye izinto eziphambili zezi zilandelayo:
Indlela Ephumelelayo Production Process
Le lwaka ukulolonga kuyinto kakhulu kakuhle inkqubo yokuvelisa. Izixa ezikhulu lwaka nga kuveliswa yile nkqubo.
Iimveliso bokwenziwa ngokusebenzisa le nqubo kakhulu ngqo-based, twatse, kwaye ayiguquki.
Ezi mveliso kuveliswa ngexesha ngaphantsi kakhulu nto leyo kwandisa ukusebenza inkqubo yokuvelisa. Inkqubo Inaliti yokubumba yenza ukuvelisa lwaka ngu zero imposiso irhafu.
The automotive industry requires parts and components of ophezulu ezikumgangatho to be used for ensuring safety, and hence the injection molding process is the ideal for the industry.
Ukuvelisa lwaka usebenzisa iteknoloji ziphene yokubumba yi kakhulu engabiziyo . Ixabiso ongundoqo kuqala ukuyila imveliso kunye sokubumba. Xa oku kwenziwe, imveliso ukuba yenziwe bulk- kwi amawaka okanye nkqu millions- guilabel phantsi iindleko zizonke kwimveliso kakhulu.
Nezimo Ukusetyenziswa eluhlaza Materials
Le Inaliti Inkqubo udini imveliso ivumela ukuba kungabikho bungqingqwa ngokusebenzisa nentlaka ngaphezu kwesinye kuneplastiki nanjengoko izinto ekrwada.
I silwenza Ungasebenzisa indibaniselwano iiplastiki ezahlukeneyo kungandisa amandla, uqinile, kunye nomgangatho lwaka zenziwe.
Fillers nako zongezwe nentlaka zeplastiki ukwandisa amandla nokoma imveliso eyenziweyo.
Isicelo Common for Automotive Izahlulo Ukubumbela
Le lwaka ukulolonga iye ebaluleke kakhulu kushishino ngomatshini. A uninzi lwabantu lwaka enziwa ngokusebenzisa inkqubo yokubumba inaliti.
Le nkqubo yenza ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye ngqo esekelwe leyo ibaluleke kakhulu kushishino ngomatshini. Le mveliso yenziwa izixa isambuku kwaye kungoko ke imali kakhulu.
Njengoko lwaka kusenziwa kusetyenziswa isitofu yokubumba ezi elula kakhulu, oko kunceda ukuphucula ukusebenza amafutha le moto. Ezinye iindawo zixhaphakileyo jikelele apho enziwa ngokusebenzisa inkqubo ziphene yokubumba zimi ngolu hlobo lulandelayo:
Dashboard imoto leyo likwaneklinkhi iiphaneli isixhobo efana isantya, amafutha gauge, iinkqubo nxazonke, njl enziwa yi inkqubo ngenaliti xa sisakhula.
Iipanele emnyango luqulathe components zeplastiki oluxonxiweyo kunye neendawo zemisebenzi zokugcina. Iiphaneli umnyango wenza kusetyenziswa isitofu yokubumba na ifuthe-ukumelana, ayisindi kunye ixesha elide. Lo msebenzi osemqoka ezilula kunceda lula ukusetyenziswa kananjalo ukuphucula impumelelo amafutha.
Le ivili kwi iimoto yenye yeendima ezibalulekileyo kwaye yenziwa yi inkqubo ngenaliti xa sisakhula. Le ivili yoqobo yenziwa yi ukulolonga iiplastiki ezifanelekileyo ezifana lyu phezu engundoqo yesinyithi.
Amavili isondo esiveliswa obu bugcisa zimalunga -20% elula ngaphezu kweevili steering abadala. Oku kuphucula ukuphathwa kunye uphume kwe ivili lokuqhuba.
Amavili isondo nayo ixesha elide ngakumbi nefuthe ukumelana xa kusenziwa kusetyenziswa iteknoloji ziphene sukube.